トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ R-mhanya (Earl manyorerwo) kadhi [wokurarama zvikwereti chete]
nepakati yemasiraidhi wechikoro uye mubereko sandara-mwero wokurarama chikwereti. 10,000 Yen yokumusoro panogumira rendi mari, 20,000 Yen, akaisa pakati 30.000 Yen, achazadzisa pamusoro unotevera mwedzi kana kadhi anopedza kunopfuura yakatarwa mari. Kana uri kushandisa 100,000 Yen wakaiswa kuti 10,000 Yen kosi yacho rendi, kufarira achava 1250 Yen kane 1.25%, kusvika 8750 Yen kubvisa zviri 1250 Yen kubva 10,000 Yen ose mutsividzo iri chikuru Ngazvidyirwe dzinounzwa.
60 Yen kubva 400,000 Yen
R-mhanya (Earl mararamiro) kadhi iri ribonucleic akazvitsaurira kadhi nekanzuru Jack kuti mutengi chikwereti hofori. Annual nhengo kubhadhara nderwepachena yose nzira kubva pakutanga kwegore. Zvinotora ribonucleic kufarira kubva pakutanga. Kana iwe onana chikumbiro centre kana akapfuudza
chikwereti muganhu, unogona prepayment. Iva raanotaura rimwe muripo kana bhonasi mukanyiwa-mari muripo wokurarama chikwereti dzimwe mubhadharo nzira dzakadai, chete kupa, ichava rwoga kuti wokurarama chikwereti kurapwa.
akaita vava Lovely pfungwa iropafadzo
Jacks pfungwa hurongwa, zvichienzaniswa nevamwe Jacks issuance pamusoro kadhi vachava kaviri zvakatinakidza. Zvinokwanisika kuponesa mumwe nomumwe 2 pfungwa 200 Yen, kuti rutapudzo reshiyo anogara 1%. Pfungwa iyi inogona vakatsinhanisa Ana makiromita kana JAL Mileage Bank, DoCoMo nguva, T ndeyokuti yakanaka nyore kushandisa kadhi.
Zvisinei, kusarudza zvizere mubhadharo panguva yokutanga kuitira kudzivisa vachifarira wokurarama zvikwereti, vanhu kushandisa kugutsikana iri wokurarama chikwereti mubereko 1. 25% yazova yechokwadi-unoparadza Terms. Pane okuwedzera basa rainzi mambure rugare rwepfungwa mabasa sezvo kubiridzira matanho ari paIndaneti, kazhinji chikwereti kambani haasi ini muripo, muripo pakuparwa kunze komutemo kushandisa kadhi nhamba paIndaneti kwave kwemasanga.
pagore muripo sezvo zvikomborero yakakura ndechokuti mhiri kwemakungwa kufamba inishuwarenzi mahara kuchinja kwemasanga. Naizvozvo, rinobatsirawo sechipiriso kadhi kushandisa sezvo inishuwarenzi kufamba mhiri. Nokuti iri automatic kwemasanga, mugumisiro akangofanana kuti huri inishuwarenzi chete inoitwa ShichiEru.
akafanana inishuwarenzi, akadai zvipo afambe kambani, chinhu chimwe sezvo muripo nokuda kuzotadzira tsaona uye chirwere kurapwa yokufambisa uye mukwende vari plus akabatanidzwa inishuwarenzi kwaidiwa kufamba kunze chete vane zvichava.
Vafambi vanenge varumbidzwa
chikumbiro zvinodiwa zvinofanirwa anogona nevanhu phone zera iri nemakore 18 kana vakura, unogona nokunyora magwaro mudzidzi. Kufunga pamwe zviri kuchinjaniswa pamwe pfungwa Ana uye JAL, imi munoti kuti kadhi kuti zvakakodzera vanhu vanoenda kazhinji kuenda kunze kwenyika.
kumba uye kunze, zvinhu yakatengwa muna R-manyorerwo kadhi, uyewo basa rinonzi kunotenga kudzivirira kudzikamisa zvaparadzwa, akadai kukuvara kana kuba kunokonzerwa netsaona tsaona mazuva 90 kubva musi rwokutenga kusvika mamiriyoni 1 Yen pagore zviri kwemasanga.
kunogonawo kuwedzera nezvimwewo kadhi, kufamba kufarira vanhu uye, zvakakodzera vanhu vakadaro vachishingairira. Shopping kudzivirira kunyange wongororo zvave zvikuru dzinoongororwa, mukurumbira uye pane pfungwa akachengeteka kuchitoro. System rinonzi J dhepoti Mobile kuti kunodudzwa Billing kuti maserura ndeyakewo dzakakurumbira nemupristi Gengi. Akafanana inishuwarenzi kuti, uye muripo ndiyo ndinoiitawo kuti kukuvadza zvinokuvadza, chirwere kurapwa yokufambisa uye nenhumbi, mugumisiro akangofanana inishuwarenzi zvinodiwa parwendo kunze chete kuti.
kunogonawo kuwedzera nezvimwewo kadhi, kufamba kufarira vanhu uye, zvakakodzera vanhu vakadaro vachishingairira. Shopping kudzivirira kunyange wongororo zvave zvikuru dzinoongororwa, mukurumbira uye pane pfungwa akachengeteka kuchitoro. System rinonzi J dhepoti Mobile kuti kunodudzwa Billing kuti maserura ndeyakewo dzakakurumbira nemupristi Gengi. Line kufarira vanhu uye, tiri yakakodzera vanhu vakadaro vachishingairira. Shopping kudzivirira kunyange wongororo zvave zvikuru dzinoongororwa, mukurumbira uye pane pfungwa akachengeteka kuchitoro. System rinonzi J dhepoti Mobile kuti kunodudzwa Billing kuti maserura ndeyakewo dzakakurumbira nemupristi Gengi. Line kufarira vanhu uye, tiri yakakodzera vanhu vakadaro vachishingairira. Shopping kudzivirira kunyange wongororo zvave zvikuru dzinoongororwa, mukurumbira uye pane pfungwa akachengeteka kuchitoro. System rinonzi J dhepoti Mobile kuti kunodudzwa Billing kuti maserura ndeyakewo dzakakurumbira nemupristi Gengi.